उमेर हदबन्दीले तिलमिलाए बैंकर, राष्ट्र बैंकमा बेनामे उजुरी, कानुनी उपचार खोज्ने धम्की - Nepal's Digital News Paper
उमेर हदबन्दीले तिलमिलाए बैंकर, राष्ट्र बैंकमा बेनामे उजुरी, कानुनी उपचार खोज्ने धम्की
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले उमेर हदको विरोध गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) र सञ्चालकको उमेर हद तोकेपछि उनीहरूले यसमा संशोधनको माग गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले गत साता एकीकृत निर्देशन २०७५ संशोधन गरेको हो । त्यसअनुरुप ७० वर्ष पुगेका व्यक्ति सञ्चालकमा नियुक्त तथा मनोनीत हुन पाउँदैनन् । ७४ वर्ष नाघेका व्यक्ति सञ्चालकमा बहाल नहुने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । ६५ वर्ष नाघेका व्यक्ति सीईओ नियुक्त हुन नपाउने र ६९ वर्ष नाघेको सीईओले स्वतः पदबाट अवकाश हुने व्यवस्था छ ।
यसअघि सीईओ तथा सञ्चालकका लागि उमेर हद थिएन । सञ्चालकको उमेर हदविरुद्ध दुई समूहले पत्र बुझाएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जनाएको छ । ‘एउटा पत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनीको बेनामी पत्र आएको छ । अर्कोमा चार सञ्चालकसहितको पत्र आएको छ’, पत्रबारे उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले उमेर हदबन्दी लगाउन पाउँदैन । यो कानुनविपरीत हो । हाम्रो मागको सुनुवाइ नगरे कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुनेछौं भनेर सञ्चालकले पत्र बुझाएका छन् ।’
राष्ट्र बैंकको निर्देशनविरुद्ध खडा भएको सनराइज बैंकका निर्देशक इ. बछराज तातेरले बताए । आफू उमेर हदबन्दी संशोधनको माग राख्न भने नगएको उनले बताए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन व्यावहारिक नभएकामा सबै सञ्चालक एकमत छन । केन्द्रीय बैंकले सुझावै नलिई निर्णय गर्दा आफ्नो लगानी जोखिममा रहेको उनको तर्क छ । ‘केन्द्रीय बैंकले हाम्रो व्यवसाय तथा लगानीको संरक्षण गरिदिनुप¥यो’, उनले भने, ‘यसरी अपरझट निर्देशन दिनु गलत हो । यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ ।’
एभरेस्ट बैंकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ, नबिल बैंकका अध्यक्षलगायत बैंकका सञ्चालकलाई उमेर हदबन्दीले सञ्चालकबाट हट्न बाध्य बनाएको छ । प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी नारायणदास मानन्धरलाई उमेरहद लागेको छ । यसबाहेक धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकलाई पनि उमेर हद लाग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
बैंकका सञ्चालक केही भारत बस्ने र नेपालमा पनि नआउने, यहाँको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नीति नमान्ने, मर्जरमा जान अनुरोध गर्दा अटेर गर्नेलगायत कारणले गर्दा यस्तो निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । सञ्चालक तथा सीईओ लामो समय एउटै संस्थामा रहँदा मनोपोली हुन सक्ने र सुशासनमा आँच आउन सक्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।
जनप्रतिनिधिले किन तलव लिने ? सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर
२७ बैंकको नाफा ६५ अर्ब ३४ करोड, एक बर्षमा कुन बैंकको आम्दानी कति (सूचिसहित)